"Hataontsika ahoana no fandositra, raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika? dia ilay nampilazaina ny Tompo tamin’ny voalohany, ary nohamafisin’izay nandre tamintsika kosa."Hebreo 2:3
Heverintsika ho tsy fahadisoana lehibe loatra ny tsy fitandremana. Saingy arakaraka ny vokatra aterany no maha lehibe na tsia izany. Ny tsy fitandreman’ny mpamily fiarakodia izay tsy manaja takela-by iray, dia matetika no tsy tsikaritra, saingy hosaziana izany, raha miteraka lozam-pifamoivoizana, na koa hitan’ny mpitandro filaminana fotsiny.
Ny teny nomena antsika androany dia miresaka momba ireo “tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao”. Angamba izy ireny tsy naniratsira an’Andriamanitra mihitsy, tsy ninia niaina manohitra ny sitrapony. Fa misy zavatra, mety ho bitika ihany, mahatonga azy ireo hanao ampitso lava ny fotoana hifandraisana amin’Andriamanitra. Mba hanorenana izany fifandraisana izany, dia ilaina ny manaiky ny famelan-keloka efa azon’i Jesosy Zanany ho antsika, tamin’ny nahafatesany teo amin’ny hazofijaliana. Aoka tsy hangataka andro, fa hanaiky izany famonjena lehibe izany. Lehibe, satria fanomezana avy amin’Andriamanitra. Afaka mamonjy na izay meloka indrindra amintsika aza izany; manome fiainana mandrakizay; tsy mitaky na inona na inona amin’ny mpanota, afa-tsy finoana; lehibe izany, indrindra noho Ilay nanatanteraka azy, dia ny Zanak’Andriamanitra (Hebreo 5:9).
Raha anisan’ireo tsy nitandrina ireo ianao, dia hevero tsara izay ho vokatr’izany: mandoza lavitra noho izay olana ara-bola, na ara-pahasalamana, na izay fisarahana aman’olon-tiana. Ny hoavinao mandrakizay no resahina. Marina e, aza mangataka andro, fa manapaha hevitra.